Famakafakana sy fandefasana ny keypad I-CaseBoard | Vaovao IPhone
Betsaka ny kojakoja ho an'ny iPad: mpandahateny mifandray amin'ny dock iPad, fitendry izay mifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth ary izy ireo dia manoratra na aiza na aiza amin'ny iOS na kojakoja samihafa izay miaraka aminay mandritra ny andro andavanandro ho fonony ...
Androany isika dia handinika klavier ho an'ny iPad antsoina hoe: i-CaseBoard. Ho fanampin'ny fanaovana famerenana mandinika hamboarinay ny iray amin'ireo fitendry eo amin'ireo mpanaraka anay ny Actualidad iPad.
1 i-CaseBoard: Volavola
2 Fifanarahana sy refy
3 Ny fanondroana teknika
Ny fisehon'ny kitendry I-CaseBoard dia manana fitoviana lehibe amin'ny MacBook fotsiny tamin'ny taona vitsivitsy lasa izay. Eo amin'ny farany ambany dia vita amin'ny loko volomboasary, fotsy ny zavatra hafa rehetra. Vita amin'ny plastika tsy dia henjana loatra izy io ka mila manana mitandrema rehefa latsaka na ny kapoka. Mikasika ny slots inona no olana amin'izany:
Volan'ny feo sy mikrô
Any aoriana, manana a toerana malalaka plastika aiza no hahitana ny Apple an'ny iPad rehefa ampidirintsika.
Ao anatiny, manana ny kitendry miaraka aminy isika lakile mainty. Any an-tampon'ny ananantsika bokotra telo izay hanompo an'i:
Ampidiro ny Bluetooth
Mampiasà charger fa tsy bateria
Ny lakile dia misy a famaranana tena manintona ary miaraka amin'ny hateviny manify tokoa raha ampitahaina amin'ny kitendry birao mahazatra.
Fifanarahana sy refy
Ny i-CaseBoard dia mifanaraka amin'ny iPad 2 sy iPad 3.
247 × 195.5x24mm
Bluetooth 3.0 mifandray amin'ny iPad
Manohana ny asan'ny kitendry mahazatra
Bateria 4000 mAh (lithium polymer) hampiasa ny klavier ho PowerBook
Misy andriamby izay rehefa esorinao ny fonony iPad dia mihodina eo noho eo izy
Voalohany, tsy maintsy manao izany isika apetraho amin'ny iPad ny iPad noforonina ho azy.
Manaraka izany, tsy maintsy hanao izany isika mampihetsika Bluetooth amin'ny iPad-nay
Alefaso ny klavier ary paompy indroa amin'ny bokotra Bluetooth. Rehefa manao izany isika, dia hisy jiro manga hikapoka mandritra ny 5 segondra.
Hiseho amin'ny iPad ny fitaovana, hiara-hampiaraka aminy izahay.
Hanome antsika a Kaody 4 isatoy izao:
Avy eo io kaody io dia tsy maintsy ataontsika ampidiro amin'ny keyboard I-CaseBoard miaraka amin'ny keypad numeric ary tsindrio Enter. Ho fantatsika fa azontsika tsara izany rehefa mandeha ny varavarankely pop-up amin'ny iPad.
Vonona izahay hanoratra amin'ny I-CaseBoard anay. Amin'ny rindranasa toy ny Messages dia tsy haseho ny kitendry iPad, fa kosa hanery izay toerana tiantsika soratana amin'ny rantsan-tànantsika izahay ary tsy maintsy manoratra toy ny amin'ny klavier tena izy isika.
Ao amin'ny Actualidad iPad dia ankafizinay ny fandraisan'anjaran'ny mpamaky ary noho izany, hanome keyboard-I-CaseBoard anao izahay nomen'ny tranokala Electromedia, mandamina azy. Ho an'ity dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Araho ny iPad News ao amin'ny Google Plus
Omeo +1 ny lahatsoratra
Manana izany ianao Hatramin'ny 7 Jolay, amin'ny Alahady handray anjara. Amin'ny Alatsinainy dia hanambara ny mpandresy isika izay tsy maintsy hifandray aminay mba hahafahanay mandefa azy ny fitendry.
Fanazavana fanampiny - Fanadihadiana ifotony ho an'ny iPad sy iPhone Woody Dock Duo ary fampiroboroboana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fanadihadiana sy famolavolana ny klavier I-CaseBoard: #GanaTecladoiPad
Tsara vintana. Kitendry tsara 🙂
Mandray anjara 😉
Antonio J. dia hoy izy:
Efa nanome izahay handray anjara. Mirary soa namana!
Valiny tamin'i Antonio J.
Vanesa Exposito Alba dia hoy izy:
Tiako!! Enga anie ny vintana ...
Valiny tamin'i Vanesa Exposito Alba
Kocx dia hoy izy:
mandray anjara ..
Valiny amin'i Kocx
Iray indray. Andao hojerentsika raha manana fitendry aho aorian'ny fanadinana. 🙂
Daneka dia hoy izy:
OK vonona! Misaotra
Valio amin'i Daneka
Andao hojerentsika raha tsara vintana isika…
Ricardo Cajias dia hoy izy:
Tsara vintana ho ahy
Valiny tamin'i Ricardo Cajias
pepepools dia hoy izy:
Tiako homena ny vadiko izay apelmaniaca.
Mario Cabezas avy ao amin'ny Alamo dia hoy izy:
Misoratra anarana amin'ny fifaninanana !!
Etsy ankilany, milaza ianao fa ny i-CaseBoard dia mifanaraka amin'ny iPad 2 sy iPad 3. Tsy mifanaraka amin'ny iPad 4 ve izany?
Valiny tamin'i Mario Cabezas del Alamo
Carlos Santana Sanchez sary placeholder dia hoy izy:
Mandray anjara ihany koa aho, saingy ny olana mifanentana dia manahirana ahy, ipad mini no miseho amin'ny sary, ary mifanaraka amin'ny ipad 2 sy ipad 3, aiza no sisa tavela?
Valiny tamin'i Carlos Santana Sanchez
Eny ... handray anjara. Manantena aho fa afaka, satria avy any Arzantina aho 🙂
Ayose dia hoy izy:
Mirary soa ho an'ny rehetra 🙂
Mamaly an'i Ayose
Iray hafa ihany hehehe
Michele dia hoy izy:
ary iza no nandresy?
Mamaly an'i michele
squirrel dia hoy izy:
Mahafantatra zavatra momba ny antsapaka ve ianao ??? iza no nandresy an'io?
Valiny amin'ny squirrel
Ny nandresy dia i Luis Alberto Fernández; Nahita ny takiana ianao ary miandry anao hanamafy ny adiresinao izahay.
Raha tsy mamaly izy dia tsy maintsy ho tanterahina indray ny antsapaka miaraka amin'ireo sisa mpandray anjara.
Luis Alberto Fernandez dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ny loka… Faly be aho fa afaka nandresy tamin'ny fifaninanana ary nahazo ity kitendry I-CaseBoard mahafinaritra ity… Te hisaotra an'i Miguel Angel Gaton aho noho ny faharetany sy ny ekipa aktiphone.com rehetra 🙂 Misaotra!
Valiny tamin'i Luis Alberto Fernández
Ahoana no hahitana raha voahidy amin'ny iPhone ny iPhone?
Mpamaky RSS mifanentana tsara indrindra amin'ny iPhone